Iwe unoda kuendesa fomu semufambi ane hunyanzvi?
Immigration Mutemo » Akakwirira ane hunyanzvi ekufambisa - mutemo wekubuda
Iyo danho rekufambisa ruzivo mukati meiyo danho reDutch mutongo rinoita kuti makambani akwanise kukwezva vafambi ruzivo nekukurumidza uye nyore. Vashandi vane ruzivo rwakanyanya kubva kunze kwenyika dzeEuropean Union vanogona kushanda muNetherlands semuenzaniso chinzvimbo chepamusoro chevatariri kana sehunyanzvi pasi pemamiriro ezvinhu echirongwa ichi.
BENERER KUSVIRA KUSVIRA KWEMAHARA?
Akakwirira ane hunyanzvi ekufambisa - mutemo wekubuda
Iyo danho rekufambisa ruzivo mukati meiyo danho reDutch mutongo rinoita kuti makambani akwanise kukwezva vafambi ruzivo nekukurumidza uye nyore. Vashandi vane ruzivo rwakanyanya kubva kunze kwenyika dzeEuropean Union vanogona kushanda muNetherlands semuenzaniso chinzvimbo chepamusoro chevatariri kana sehunyanzvi pasi pemamiriro ezvinhu echirongwa ichi. Nekudaro, vese vari vaviri ruzivo rwekusimuka uye mushandirwi anofanira kusangana akati wandei mamiriro.
> Akakwirira ane hunyanzvi mamiriro ekufambisa
> Kumbira ruzivo rwokufamba
> European Blue Kadhi
Akakwirira ane hunyanzvi mamiriro ekufambisa
Iwe uri mufambi wekuziva uye unoda here kupawo mari kuDutch ruzivo rwehupfumi? Kana zvirizvo, iwe unotanga kuda mvumo yekugara. Pamberi pemvumo yekugara isati yapiwa, iwe unofanirwa kuve nechibvumirano chebasa nemushandirwi kana chinzvimbo chekutsvagisa muNetherlands chakagadzwa neI IND semuvhenekeri anotsigirwa uye inosanganisirwa murejista yeruzhinji yevatsigiri vanozivikanwa. Iwe unofanirwawo kuwana mari yakakwana uye unofanirwa kunge wabvumirana pamubhadharo unoenderana nemusika pamwe newako waunoshandira.
Kwete iwe chete, asiwo kambani kwauri kuenda kunoshanda inofanirwa kuzadzisa mamwe mamiriro. Iwe uri kambani iri kuda kuhaya munhu ane hunyanzvi hwekufamba? Muchiitiko ichocho, iwe unofanirwa kutanga kune zvese unozivikanwa ne IND semuxhasi. Kuvimbika uye kuenderera mberi kwekambani yako kwakakosha. Kambani yako inozivikanwa seanotsigira here? Muchiitiko ichocho, kambani yako inofanirwa kutevedzera zvinotevera zvinosungirwa: basa rekutonga, basa rekupa ruzivo uye basa rekutarisira. Kambani yako inotadza kuzviita here? Kana zvirizvo, izvi zvinogona kutungamira kubviswa kwekuzivikanwa seanotsigira.
Iwe unoda here kutamira kuNetherlands? Fona pakubatsira pamutemo
Kumbira ruzivo rwokufamba
Wakapihwa mvumo yekugara here? Kana zvirizvo, iyo nguva yekubvumidzwa kwepamvumo yekugara ichave yakaenzana nenguva yekondirakiti yako yekushanda neinosvika makore mashanu. Mvumo yacho inogona kuwedzerwa nekusingaperi.
Munguva yechokwadi chekubvumidzwa kwekugara kwako mvumo, unogona kushandura mushandirwi seane hunyanzvi hwekufamba uye kubatana neimwe kambani inozivikanwa neiyo IND seinotsigira. Wese wekare uye mutsva mushandirwi anofanirwa kutaurira shanduko yako yebasa kune IND mukati memavhiki mana.
Iwe unova unoshaya basa semutambi ane hunyanzvi? Munaizvozvo, une kodzero yekutsvaga mwedzi mitatu kubva musi wapera basa. Kana iwe usingakwanise kujoina mumwe mushandirwi (mutsigiri) semufambi ane hunyanzvi mukati me nguva yekutsvaga, iyo IND ichadzosera mvumo yako.
European Blue Kadhi
Kubva munaJune 2011, mutambi ane hunyanzvi ane hunyanzvi anogona kunyorera EU Blue Kadhi (EU Blue Kadhi) mukuwedzera kubvumidzwa kwekugara. EU Blue Kadhi inzvimbo yekugara pamwe nemvumo yekushandira kune vane hunyanzvi vanobva kune dzimwe nyika vasina hunyanzvi hweimwe yeLungu Nyika dzeEuropean Union.
IEuropean Blue Card Kadhi inopa vane hunyanzvi vanobva kune imwe nyika huwandu hwezvakanakira. Chekutanga pane zvese, mushandirwi weanotama ane hunyanzvi haafanire kuzivikanwa neiyo IND semuxhasi. Uye zvakare, semunhu ane hunyanzvi hwekufamba, iye zvakare ane European Blue Kadhi, unogona kushanda mune imwe Nhengo Nyika mushure mekushanda muNetherlands kwemwedzi gumi nemisere, chero iwe ukasangana nemamiriro ezvinhu muiyo Nhengo Nhengo.
Kuti ugone kuve wakakodzera muEuropean Blue Card, unofanirwa kusangana nemamiriro akaoma pane pemvumo yekugara semutengesi ane hunyanzvi. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kuve nekontrakiti yekushandira kwemwedzi gumi nemaviri kana inopfuura, wapedza kanokwana makore matatu chirongwa che bachelor muchikoro chepamusoro (hbo) uye uwane inove mubhadharo webhadharo weBlue Card pamwedzi.